Abavelisi boomatshini bePlastikhi bePlastiki - abavelisi boTshintsho lwePlastiki kunye neFektri
I-LQ250-300PE yeFilimu enqanaba lesibini umgca wokuthambisa
Inkcukacha parameter Belt yokuthutha 1. ububanzi olusebenzayo: 600mm 2.Motor amandla: 1.5KW Agglomeration igumbi 1.Motor amandla: 45KW 2.Total Umthamo: 200L 3. umthamo olusebenzayo: 150L 4.Rotary blade: 9 5.Fixed blade: 12 6 Isantya sokujikeleza kweeblade: 900RPM LQ-SJ85 / 28 Isithuthi esiqhubayo: I-55 KW, i-AC motor (i-SIMENS China) Isikrufu: Ububanzi besikrufu: 85mm, L / D: 28/1 Izinto zesikere: 38CrMoAlUmgangatho wonyango: I-Nitriding processing Barrel Ukulungiswa kwangaphakathi: ...
LQ-HY61 / 62B 66 / 76B iimilo oluzenzekelayo (BOPS) zeplastiki
Oku ngokupheleleyo umatshini wokumatshini ozenzekelayo weplastikhi yindibaniselwano yezixhobo zoomatshini, zombane kunye nezomoya, kwaye yonke inkqubo ilawulwa yi-PLC encinci, enokuthi iqhutywe kumdibaniso womntu. Indibaniselwano yokondla impahla, ukufudumeza, ukwenza, ukusika kunye nokufumba inkqubo ibe nye kwi-BOPS, PS, APET, PVC，IPLA Uqweqwe lweplastiki olwenza izinto ezahlukeneyo ezineziciko, izitya, iitreyi, ii-clamshells kunye nezinye iimveliso, ezinjengeziciko zebhokisi yesidlo sasemini, iziciko ze-sushi, iziciko zephepha, izitya ze-aluminium, iitreyi zekhekhe lenyanga, iitreyi zekhekhe, iitreyi zokutya iitreyi, iyeza lokwenza inaliti.
Umatshini we-LQ-HY-3021 wePlastiki oChukumisayo kunye noNgekhoyo
Inkqubo yemveliso: Iimpawu eziphambili: ■ Ifanele i-PP, i-APET, iPVC, iPLA, iiBOPS, iphepha leplastiki lePS; ■ Ukondla, ukwenza, ukusika, ukufumba kwezinto kuqhutywa ziiservo motor; ■ Ukondla, ukuyila, ukusika ukungunda kunye nokufaka ingqokelela yimveliso epheleleyo ngokuzenzekelayo; ■ Ikubumbe ngesixhobo sokutshintsha ngokukhawuleza, ukugcinwa ngokulula; ■ Ukwenza i-7bar yoxinzelelo lomoya kunye ne-vacuum; ■ Iinkqubo zokubeka isitaki ezikhethiweyo kabini ； Ukucaciswa: Imodeli ye-LQ-HY-3021 Indawo yokuYila kaMax 760 * 540mm ifom enkulu ...
LQ-HY-54/76 Full Zenzekelayo Thermoforming Machine
Iimpawu: Izinto ezifanelekileyo ezifanelekileyo zePET / PS / BOPS / HIPS / PVC / PLA Yokwenza iNdawo 540 × 760mm Eyila Ubunzulu be-120mm yokuQinisa amandla i-90 Ton Sheet Ubunzima beRange 0.10-1.0 mm Max. I-Sheet Roll Ububanzi be-710mm Max.Ububanzi be-810mm yoXinzelelo loMoya 0.7 iMpa yokuSetyenziswa kwaManzi i-6 Liters / min Ukusetyenziswa komoya i-1300 Liters / min Ukusetyenziswa kwaMandla i-9kw / hr (Uqikelelo) Isantya semveliso i-600-1200 recycles / hr Voltage Tri-phase, AC380 ...